Uma unquma bachitha iholidi lesingeke UAE, kanye indawo yokugoba amadlangala idolobha lakho kubhekwe Sharjah (Sharjah) , i-Holiday International, Sharjah Ihhotela 4 * kungaba inketho esihle yokuhlala.
Leli hhotela itholakala cishe maphakathi Sharjah, ogwini echwebeni Khalid. A ngomzuzu-20 kusuka e-zezindiza ezimbili ayatholakala. Indawo ezungezile unemisebenzi izindawo zokudlela, amathilomu kanye nezitolo. Kukhona futhi etholakala emakethe futhi epaki.
Ihhotela Holiday International Hotel Sharjah 4 * lakhiwa ngo-1979. Ngo-2015, i-yokulungiswa emikhulu kwenziwa lapha. Ihhotela siqukethe eyodwa isakhiwo esikhulu 14-storey. Ihhotela izindlu emelelwa 253 amakamelo ejwayelekile, Deluxe, samakamelo amancane, isixhobo kamongameli suite esiphezulu. Zonke amafulethi babe air conditioning, ithelevishini (kukhona isiteshi esisodwa ngesiRashiya), mini-bar, ephephile, yokugezela, kuvulandi. Yokuhlanza ushintsho amathawula nsuku zonke. Ngokusho abahambi, be-intanethi uxhumano "catch" ezinhle kungaqali kuwo wonke amagumbi. Nokho, ungakwazi ukuyisebenzisa elisendaweni yokwamukela abantu, nezindawo zokudlela yehhotela.
Ehhotela kukhona ichibi lokubhukuda, ilanga ithala, zokudlala, esitolo, exchange, ukuvakasha edeskini, isikhungo spa.
Njengoba eyizinhlobonhlobo edliwayo, uma ukubhuka, abahambi ungakhetha eyodwa yezinketho: ibhulakufesi kuphela; ibhulakufesi kanye dinner (ibhulakufesi nesidlo sakusihlwa); ibhodi egcwele (ukudla ezintathu).
Beach ingxenye yesine ihora uhamba ngemoto. Ngoba bonke abafuna izikhathi ezimbalwa ngosuku, free service Shuttle. Nokho-to-coast engafinyelelwa ngeteksi.
Holiday International Hotel Sharjah 4 *: Izibuyekezo lezihambi kusukela Russian Federation
Njengoba abaningi izivakashi zanamuhla zizama ngokucophelela ukuze asondele udaba lokuzikhethela lwamahhotela ezweni elinikeziwe, bafuna iqoqe kusayithi yabo njengoba ukwaziswa okuningi ngangokunokwenzeka. Futhi akuseyona ngokwanele nje incazelo esemthethweni ye umphathi wehhotela lase futhi inkampani yokulungisela abahambayo iseluleko. Ngakho, abahambi uzama ukufunda futhi libuyekeza kwabanye abantu abaye bavakashela nabo kuleli hhotela. Le ndlela ivumela ephelele ngaphezulu futhi eduze sinjani ngempela isimo umqondo wokuthi ngeke zikhishwe nokudumazeka ngesikhathi efika iholide eside elindelwe. Kule ndaba, manje ukukunikeza imibono generalized ngabesizwe yethu wabashiya emva kokuvakashela Ihhotela Holiday International Sharjah 4 *. A bit ngakho bagijima bafika kuqala, siphawula ukuthi iningi izivakashi ukukhetha labo kwakungenanzuzo udumazeke. Ngokombono wabo, leli hhotela uhambisane nenani wamemezela for the yokuhlala. Kodwa siyazi everything ngokugcwele.
Naphezu kweqiniso lokuthi ihhotela awumusha, lezihambi basutha nge ngokubukeka kwakhe, futhi umhlobiso ingaphakathi. Ngakho, ngokuvumelana bakithi lapha lubonakale ukulungisa fresh. Ngokuqondene amakamelo ezihlongozwayo kuzivakashi ngalesosikhathi they cishe zonke izivakashi basutha. Njengoba amaholide bathi zonke zokuhlala Holiday International Hotel Sharjah 4 * ngempela ivulekile, elikhanyayo futhi wesilisa ahlotshiswa. Izivakashi kugujwa akusito letinsha, kodvwa izinga eliphezulu kakhulu futhi ifenisha ukhululekile, amasu okusebenza esihle. Uma uya eholidini izingane, bese ubambe induku nge opopayi, ngoba kule amakamelo anemisila USB-isixhumi. izivakashi eziningi futhi uphawulile emazwini akhe amakhethinisi avikela ezikuvumela ukulala ekuseni (phela abayeki e imisebe Igumbi avuka ekuseni Ukukhanya kwelanga), kanye balcony lovely, lapho ungakwazi uhlale zibabaza esikuyo. Izimangalo kwakungafanele ukuvuna abahambi.
izivakashi eziningi wayekhetha Ihhotela Holiday International Sharjah 4 * ngokukhethekile ngenxa indawo yayo. Ngakho, ihhotela itholakala cishe maphakathi edolobheni. Eziluzungezile ziningi izindawo zokuhamba ngezinyawo nokuhamba yezitolo, lapho, nahlulele by amazwana ezakhamizi zethu nabo beswela ehhotela, etholakala ngqo ogwini.
Iningi izivakashi uma ukubhuka ukuhlala kuleli hhotela nje ngaphambilini ibhulakufesi. Ngokusho kwabo, ekuseni ukudla lapha muhle kabi. Imikhiqizo kanye izitsha of nsuku zonke okufanayo, kodwa kukhona njalo ongakhetha kuzo.
Kwasemini kanye dinner, izivakashi ayethanda amathilomu nezindawo zokudlela noma ezinye izindawo Sharjah. Ngokusho izakhamuzi esikanye nalo, kukhona okuningi ukudla okusheshayo ngenani lentengo elikahle. Nokho, uma ufuna pamper ngokwakho nge cuisine noma ezinye zezinguquko eziye zenziwa, ukushaywa umoya emalini yokudlela kungaba ngempela eningi.
Fun esiyinhloko izivakashi Ihhotela Holiday International Sharjah 4 * kuyiholide lolwandle. Njengoba kusho bakithi ukhathazeke yokuthi ihhotela sise ibanga elithileko kusuka kolwandle, ke akudingekile. Phela, ebhishi uhlale kungenzeka ukuthola khulula Shuttle ibhasi, okuyisona izikhathi eziningana ngosuku, noma enye itekisi luzodla wena ngempela ashibhe. Amapholisa athi ibhasi le kuzokuletha ogwini kwelinye lamahhotela. Ngena ngemvume lapha ikhokhelwa. Uyelulekwa ukuze ukwazi ukuthenga amathikithi e-reception kwehhotela yakho, kuyoba eshibhile. Ngesikhathi sebehlezi ogwini kukhona ilanga loungers kanye baphathe nezambulela, ibha. Ukuze iziphuzo okumele ikhokhwe ngokwehlukana. Eduze kukhona lolwandle yomphakathi. Phakathi nokuhambela kwakhe umuntu ngemali ungathathi. Nokho, akukho ilanga loungers ukuze ukwazi ukuhlala, walala phezu kwesihlabathi ithawula noma ecansini.
Kusukela ngosuku ogwini kushisa kakhulu, izivakashi eziningi Ihhotela Holiday International Sharjah 4 * wachitha sikhathi ehhotela. Ngakho, ngokuvumelana kubo, aphephele ekushiseni lapha kungaba hhayi kuphela emakamelweni, izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza, kodwa futhi ngasechibini. Lapha ithala ilanga loungers. Lizungezwe izihlahla, enikeza umthunzi ukonga. Ngaphezu kwalokho, ezinye izimenywa zithanda ukuvakashela sauna zendawo Hammam.
Ihhotela "Lida" nezinye amahhotela emzini Lida (Belarus)
Utamatisi ekukhulelweni: nawe ungadla noma cha?
Ethandwa kakhulu yesehlukaniso intanethi imali
Bheka awuwedwa: esekelwe endabeni horror kweqiniso